Tahriibe dooneysay in ay dadkeeda caawiso oo dhimatay | Xaysimo
Home War Tahriibe dooneysay in ay dadkeeda caawiso oo dhimatay
Tahriibe dooneysay in ay dadkeeda caawiso oo dhimatay
Dadaal weyn oo badbaadin ah ayaa la bilaabay 9-kii August, markii iyada iyo saddex qof oo kale ay ka dhaceen doon yar oo sidday 20 muhaajiriin ah – oo ay ku jireen afar carruur ah – doonta ayaa ka timid waqooyiga Faransiiska waxayna mareysay biyaha Ingiriiska.
Labo qof ayaa laga soo saaray biyaha, halka 19 qof – oo 14 ka mid ah ay Iiraan u dhasheen iyo 5 ka soo jeedday Ciraaq – ay RNLI geysay Ramsgate, balse dadkaas kuma jirin Ms Mehrad.
‘Muxuu ahaa hammigeeda?’
Parvathy Varma, oo bare ah ayaa tiri: “Waxay ahayd qof karti leh. Waxay dooneysay inay dadaal adag sameyso ayna qaadato shahaadada PhD ka dibna guursato, sidaas ayay ku hammineysay.”
“Waxay dooneysay inay caawiso dadkeeda,” ayay tiri Mrs Varma. “Waxay sheegtay in sababta ay u dooneysay inay dalkeeda uga sameyso baaritaanka ay ahayd in dadka Iiraan ku nool qaarkood ay qabaan dhibaatooyin maskaxda ah.”
Macallimadda ayaa dib u xusuusatay hadal ay Mehrad ku tiri: “Ma doonayo inaan sameeyo baaritaan aanan wax faa`iido ah u lahayn dadkeyga.”
Mrs Varma ayaa sheegtay inay ku kaftameen qorshaha Mehrad. “Waxaan weydiiya, mar qura baad tiri Canada, ma waxaad heshay lammaane Canada ka soo jeeda? Waxay tiri maya, maya, maya, dib baan kaaga sheegi doonaa.”
“Waxay sidoo kale tiri: ”Fadlan ii soo ducee’. Ka dib waxaan ogaaday inay wax uun ku howlan tahay.”
‘Waxay aad u dooneysay inay baxdo’
Waaxda Dembiyada dalkaas ayaa horraantii sannadkan ka digtay in xerada ay maamulaan OCGs – oo ah kooxo dembiilayaal ah – oo “doonayay inay rabshado u adeegsadaan qalqal gelinta muhaajiriinta doomaha ugu safraya UK”.
Mrs Varma ayaa sheegtay in aysan fahmin waxa ku kallifi kara in Ms Mehrad ay qaadato go’aan noocaas ah.